Otu esi enwe obi ụtọ ịbụ onye na-alụbeghị di ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Otu esi enwe obi ụtọ ịbụ onye na-alụbeghị di. Baịbụl na-akụziri anyị ime otú ahụ kporie ndụ nke ọ bụla n'ime oge ndụ anyị n'echeghị otu ihe mgbaru ọsọ. Pedro ላል nwa nwa lu nwa anwa nwanna ya. Ọbụlagodi na-enweghị di ma ọ bụ nwunye, ị nwere ike ibi ndụ dị mma na nke na-eju afọ.
Ọ bụrụ na ị bi naanị gị, ihe mbụ ị kwesịrị ịma bụ nke ahụ ịlụ di na nwunye agaghị agwọta nsogbu gị niile. Ọnọdụ ọ bụla nwere ihe mgbago na mgbada ya. Ịlụ di na nwunye abụghị akụkọ ifo, ọ nwere ihe isi ike ya. Na nanị ibi ndụ na owu ọmụma ma ọ bụ iru uju abụghị otu ihe. Akwụkwọ Nsọ na-egosi otú ị ga-esi ebi ndụ n'alụmdi na nwunye obi ụtọ:
Ma ọ buru kwa na i luru nwunye, unu emehieghi; ma ọ buru na nwa-ab͕ọghọ ahu alụọ, ọ dighi-emehie; ma ndị dị otú ahụ ga-enwe mkpagbu nke anụ arụ, ma ọ ga-amasị m ịzere gị ya.
1 Ndị Kọrịnt 7:28
1 Otu esi enwe obi ụtọ ịnọ n'alụghị di dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo
1.1 1. Na-ebi ndụ maka Chineke
1.2 2. Jiri enyi gị kpọrọ ihe
1.3 3. Nyere ndị ọzọ aka
Otu esi enwe obi ụtọ ịnọ n'alụghị di dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo
Otu esi enwe obi ụtọ dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo nzọụkwụ site nzọụkwụ
1. Na-ebi ndụ maka Chineke
Enwere naanị otu onye nwere ike imezu gị: Jesus. Ọ dịghị onye na-agafe ụzọ gị nwere ike imeju ihe efu nke obi gị. Naanị Jizọs nwere ike ime nke a. Gakwuru Jizọs nye ya ndụ gị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-achọta nzube na nzube maka ndụ gị. Ị gaghị anọ naanị gị, n'ihi na Jizọs ga-anọnyere gị mgbe niile.
Mgbe ịnọ naanị gị ị nwere ike itinyekwu oge n'ihe nke Chineke. N’ihi ya, nweere onwe gị ịghara ilekọta ezinụlọ iji mụtakwuo Okwu Chineke ma na-etinyekwu aka na chọọchị.
"M chọrọ, mgbe ahụ, na ị na-enweghị iru uju. Onye na-alụbeghị di na-eleba anya n’ihe nke Onyenwe anyị, nke otú ọ ga-esi na-atọ Jehova ụtọ;
1 Ndị Kọrịnt 7:32
Chọpụta ọṅụ nke ito Chineke. Wepụta oge iji nyochaa ndụ gị wee mee ka àgwà gị na echiche gị kwekọọ n'uche Chineke.
Ka obi tọ kwa gi utọ nime Jehova, Ọ gēnye kwa gi ihe nile obi-gi nāchọ.
Abụ Ọma 37: 4
Iwepụta oge iji mekwuo mmekọrịta gị na Chineke bụ nnukwu ngọzi. Agbagharala ohere iji bịaruo Chineke nso. N'ụzọ dị otú a, ịnọ n'alụghị di nwere ike inyere gị aka nke ọma ná ndụ gị.
2. Jiri enyi gị kpọrọ ihe
Ibi naanị ya apụtaghị ibi n'ebe ndị ọzọ nọ n'ụwa. Enyi na-eme ka ndụ mara mma ma weta echiche na ohere ọhụrụ. Anyị niile chọrọ ụlọ ọrụ na ịhụnanya, yabụ pụọ n'ụlọ ma soro ndị enyi na-anọrị.
Abụọ dị mma karịa otu; n'ihi na ha nwere ụgwọ kacha mma n'ọrụ ha. N'ihi na ọ bụrụ na ha daa, onye ga-akpọlite ​​enyi ya; mana oh naanị! na mgbe ọ ga-ada, ọ dịghị nke abụọ ga-ebuli ya.
Eklisiastis 4: 9-10
Ọ bụrụ na ị na-aga ụka ị nwere ike imeta ndị enyi Ndị Kraịst ga-abụ a mmetụta dị mma na ndụ gị. Ụka bụkwa ebe dị mma ịnọ izute ndị dị iche na gị, nwere ahụmahụ dịgasị iche iche na nke ahụ nwere ike ịkụziri gị ọtụtụ ihe. Otú ahụ ka i nwere ike tolite ma gbaa ume nke ụmụnna gị Ndị Kraịst.
“Ọ bụghị site n’ịkwụsị izukọta ọnụ, dị ka ụfọdụ na-eme, kama site n’ịgba anyị ume; na ihe niile, mgbe ị hụrụ na ụbọchị ahụ na-abịa."
Ndị Hibru 10:25
3. Nyere ndị ọzọ aka
Jizọs kwuru na obi ụtọ dị ukwuu n'inye ihe karịa n'ịnara ihe. N’ihi ya, ụzọ ọzọ ị ga-esi jiri oge ịnọ n’alụghị di ma ọ bụ nwunye mee ihe bụ itinye ya n’inyere ndị ọzọ aka. Ị nwere ike gọzie onye agbata obi, enyi, onye ikwu, onye ọrụ ibe ma ọ bụ ụfọdụ mkpakọrịta. Nhọrọ kacha mma bụ gbasaa Ịhụnanya Chineke para ser más feliz.
N'ihe nile m'kuziri unu na, site n'ije-ozi otú a, unu aghaghi iyere ndi nọ nkpà aka, na icheta okwu nile nke Onye-nwe-ayi Jisus, Onye siri: Ọ di ngọzi inye ihe kari inara ihe.
Nnukwu onye iro nke obi ụtọ bụ ịchọ ọdịmma onwe onye nanị. Nyere ndị ọzọ aka mụbaa obi ụtọ ma nyere gị aka ibi ndụ na mkpebi siri ike, n'eleghị anya naanị ọnọdụ nke gị. A pụrụ ịkọrọ onye ọ bụla ịhụnanya Ndị Kraịst, ọ bụghị nanị ezinụlọ.
Ibi ndụ naanị ya ekwesịghị ịbụ ahụmahụ ọjọọ ma ọ bụ kewapụ iche. Ị nwere ike iji oge a bịaruo Chineke nso na ndị nọ gị nso.
Anyị nwere olileanya na akụkọ a ga-enyere gị aka ịmata ka esi enwe obi uto inoghi di. Anyị na-ekwe nkwa na, ọ bụrụ na i tinye ndụmọdụ atọ a n'ọrụ, ị ga-enweta ọnọdụ obi ụtọ dị nnọọ iche na nke ị na-emebu. Ọ bụrụ na ị chọrọ ugbu a ịmụtakwu isiokwu Akwụkwọ Nsọ, anyị na-akwado ka ị mụta otú ụgbọ Noa dị ka.